Sidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Moscow Sheremetyevo amin'ny Qatar Airways izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Moscow Sheremetyevo amin'ny Qatar Airways izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Sidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Moscow Sheremetyevo amin'ny Qatar Airways izao.
Miaraka amin'ny tambajotran'ny Qatar Airways mitombo, ny zotram-piaramanidina dia afaka manolotra mpandeha avy any Sheremetyevo mifandray tsy misy olana mankany amin'ny toerana malaza any Azia, Afrika, Afovoany Atsinanana ary Amerika, ary ny fialan-tsasatra amin'ny tara-masoandro ambony toa an'i Maldives, Seychelles ary Zanzibar amin'ny alàlan'ny 'Aéroport tsara indrindra eran-tany 2021', Hamad International Airport (HIA).
Qatar Airways dia namindra ny serivisy ho any Moskoa avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Domodedovo mankany amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sheremetyevo.
Ny fifindrana mankany amin'ny Seranam-piaramanidina Sheremetyevo dia mahita ny voalohan'ny QSuite Qatar Airways amin'ny lalana.
Qatar Airways dia manohy manangana ny tambajotrany, izay mijoro amin'ny toerana 140 mahery amin'izao fotoana izao.
Ny sidina voalohany an'ny Qatar Airways mankany amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Sheremetyevo (SVO) dia nianjera tamin'ny 31 Oktobra 2021. Namidin'ny zotram-piaramanidina ho any Moskoa ny seranam-piaramanidina Domodedovo Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sheremetyevo (SVO) ary ankehitriny dia miasa ny Qsuite nahazo mari-pankasitrahana marobe amin'ny Business Class amin'ny lalana.
QSuite no fandriana roa voalohany ao amin'ny indostria ao amin'ny Business Class, ahitana tontonana momba ny fiainana manokana izay miala, mamela ny mpandeha amin'ny seza mifanila hamorona efitranony manokana, voalohany amin'ny karazany amin'ny indostria.
Qatar Airways Hoy ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ao amin'ny Vondrona, Andriamatoa Akbar Al Baker: “Rehefa manomboka ny voalohany amin'ny lalan'i Moskoa ny Qsuite, dia afaka miandrandra ny dia tsy hay hadinoina ao amin'ny kilasy fandraharahana tsara indrindra eran-tany ny mpandeha, mankany amin'ny toerana maro.
“Amin'ny alàlan'ny tambajotra mitombo, afaka manolotra mpandeha izahay Sheremetyevo fifandraisana tsy misy fiafarana mankany amin'ireo toerana malaza any Azia, Afrika, Afovoany Atsinanana ary Amerika, ary ny fialan-tsasatra tsara indrindra amin'ny tara-masoandro toa an'i Maldives, Seychelles ary Zanzibar amin'ny alàlan'ny 'Best Airport in the World 2021', Hamad International Airport (HIA).
Mikhail Vasilenko, tale jeneralin'ny JSC Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sheremetyevo, dia nilaza hoe: “Ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sheremetyevo dia mandray tsara Qatar Airways, ary manome lanja manokana ny ambaratonga ambony indrindra amin'ny serivisy sy ny fampiantranoana angano omen'ny zotram-piaramanidina ho an'ny mpanjifany. Tena hankasitraka an'io lalana vaovao avy any Moskoa mankany Doha io sy ny fahafahana mivezivezy any amin'ny toerana miavaka 140 mahery manerana izao tontolo izao ny mpandeha. Ho setrin'izany, ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Sheremetyevo dia vonona hanome ny mpandeha amin'ny Qatar Airways ny kojakoja maoderina indrindra, ny serivisy eran-tany amin'ny haavon'ny Skytrax 5-kintana, ary ny kalitao tsara indrindra amin'ny fikarakarana mpanjifa ho hita eo amin'ireo seranam-piaramanidina lehibe indrindra any Eoropa.
Qatar Airways dia manohy manangana ny tambajotrany, izay misy toerana 140 mahery amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ny 6 Oktobra, niditra tamin'ny fomba ofisialy ny lisitra maitso ho an'ny fitsidihana an'i Qatar i Rosia rehefa neken'ny Minisiteran'ny Fahasalamana Qatari ny vaksiny Sputnik V.